Tartaric Acid maara dị ka diamond nke wine - China Hailan bio-technology
Tartaric Acid maara dị ka diamond nke wine
Abstract: Dị nnọọ na-emeghe a kalama mmanya, okwuchi mmasị ka oké obere iberibe gbajiri iko, nke bụ tartaric acid, e nwere a mara mma aha - wine diamonds. Dị ka ihe niile organic asịd, ọ na-abịa si grape beri agba oge, nke na-hiwere site respiration nke green mmiri na osisi na-eweta a ịkpali nke fermented grape ihe ọṅụṅụ, ma ọ dịghị emetụta àgwà nke wine.
Okwu "tartar" n'ihi na ụfọdụ n'ime ndị enyi nwere ike ịbụ ụfọdụ iju. "Tartar" mere, otú a na-kpụrụ?
Wine kristal - guzobe tartar, isi mgwa ihe bụ site na manya-vine tartaric acid (Tartaric Acid), n'ihi na wine na-echekwara na a karịsịa oyi gburugburu ebe obibi. The udi nke tartar kristal, ọ dịghị ụfọdụ iwu, na mgbe ụfọdụ nnyapade, na-emekarị mmasị ka ala nke karama, n'ubu ma ọ bụ na-egosi na ala nke okwuchi.
Vaịn ọzọ esie, na elu nkezi nke tartaric acid. The ogologo vaịn na-eto eto na osisi vine, na ogologo oge amiri ihe minerals si ala, na ịnweta na nwetara tartaric acid arụpụta tartar. Ndị a kristal gaghị ike na mmanya, ma na-ọdịda na wine karama mgbidi, na ala nke na karama, akpu ma ọ bụ n'oge ọdịda na wine orù. White wine tartaric acid anya, anya nnọọ ka na-acha ọcha sugar, na red wine nke crystal nkume, mgbe ahụ, na-egosi a ọbara-ka odo odo kristal, na e nwere adịghị mfe ịchọpụta acidity.
Vintage nkume adịghị emetụta àgwà nke wine. Otú ọ dị, e nwere a-akpali nnọọ mmasị njikọ: wine, gbaa ụka usoro dịtụ ngwa ngwa, mmanya esi ísì na-echebe nke ọma. The iji nwayọọ gbaa ụka usoro bụ, obere na tartar na-precipitated na ịwụ na ihe ọ bụ na karama. Dị ka a N'ihi ya, ndị tartar na karama nwere ike akara nke magburu onwe ọrụ nke winemaker na magburu onwe ya mma nke wine.
Wine n'ime crystallization bụghị a quality nsogbu, ọ bụghị nanị ihe ọjọọ, ma manya-vine na gbaa ụka usoro na tozuru okè usoro, karịsịa na usoro nke ntozu okè ga-emepụta bekee, bụ ihe ịrịba ama nke ndị tozuru okè wine. N'ihi na mmetụta nke wine uto nke na-ejighị n'aka ihe e kewapụrụ n'ebe ndị wine, nke mere na wine na-aghọ ihe dị ọcha, ndị ọzọ mụ uto Ọdịdị, uto na ndị ọzọ mellow lubrication. Naanị àgwà nke elu àgwà wine ga nwere a ịkpali na bụ tartar. Clean, uzo wine pụkwara iyi sedimenti - crystal nkume (Wine kristal). Ọ bụrụ na mmanya na-egosi ndị dị otú ahụ a ọnọdụ, ọ ga-emetụta uto nke wine, ma mgbe e guzobere crystalline nkume ike a gbazee iji weghachi.
The "mkpuru" na wine ga-ga-hụrụ na-eto eto mmanya, nke na-egosi na ndị ịnweta ọdịnaya nke wine karịsịa elu. Ma ọtụtụ n'ime ha ka na-adị ndị okenye, àgwà nke elu karịsịa wine. Ọ bụrụ na ndị tartar na-precipitated na oak igbochi ma ọ bụ na karama, ọ bụ ihe ịrịba ama nke ruo ogologo oge nchekwa. Ndị ọkachamara na-akpọ ya "ochie tartar", ndị crystallization nke nnukwu, na-nwayọọ nwayọọ na-emepụta ihe karịrị oge.
Post oge: Mar-28-2017
FIC Efrata China 2017